Baidoa Media Center » Hawlwadeenada shabakada Baidoa media oo tacsi u dirayo qoyska Eng. Cali Xaaji Shirwac.
Hawlwadeenada shabakada Baidoa media oo tacsi u dirayo qoyska Eng. Cali Xaaji Shirwac.
August 2, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Guud ahaan hawlwadeenada iyo maamulka Shabakada warbaahinta baidoamedia.com ayaa waxa ay halkaan tacsiyo tiiraanyo leh uga dirayaan qoyska iyo ehelka Injineer Cali Xaaji Shirwac oo ay gacan ka qax daran ku dishay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xili uu injineerku ku sugnaa goob ganacsi oo uu ku leeyahay magaalada Beledweyne.
Tacsiyada ayaa waxa ay ku socotaan carruurtaa Allaha u naxariistee injineer Cali Xaaji Shirwacan oo kala ah,
Ayaan Cali Xaaji Shirwac
Liibaan Cali Xaaji Shirwacan
Leyla Cali Xaaji Shirwac
Maxamed Deeq Cali Xaaji Shirwac
Cabdifitaax Cali Xaaji Shirwacan
Cabdirisaaq Cali Xaaji Shirwac
Foos Cali Xaaji Shirwac
Cabdullaahi Cali Xaaji Shirwac iyo carruurta injineerka ee bah yaradiisa oo ku nool magaalada Beledweyne iyo guud ahaan ehelkiisa oo ku kala nool guud ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba qaaradaha kala duwan ee caalamka.
Maamulka iyo hawlwadeenada baidoamedia.com ayaa waxa ay Illaah uga baryayaan marxuum Cali Xaaji Shirwac inuu janadii Fardowso ahayd ka waraabsho, qoyskii iyo ehelkii uu ka tegayna samir iyo iimaan ka siiyo.